Trump oo laga horistaagay in uusan dadka u diidi karin daalacasha Twitterkiisa - BBC News Somali
Trump oo laga horistaagay in uusan dadka u diidi karin daalacasha Twitterkiisa
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa laga yaabaa in uusan dadka ka hor istaagin in ay la socdaan ciwaanka uu ku leeyahay Twitterka aragtida siyaasadeed ee ay qabaan awgeed, sida uu go'aamiyay xaakim ku sugan magaalada New York.
Xaakim Naomi Reice Buchwald oo ah xaakimka degmada Manhattan ayaa sheegay in dadka oo laga horistaago la socoshada ciwaanka madaxweynaha ee @realDonaldTrump in ay noqon doonto meel ka dhac lagu sameeyay xaqii uu qofku u lahaa xoriyatul qawlka.
Dacwadan ka dhanka ah Trump iyo masuuliyiinta kale ee Aqalka Cad ayaa salka ku haysay go'aan uu horay ciwaankiisa uga mamnuucay dad onlineka ka dhaliila.
Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka wali kama uusan hadlin xukunkaas.
Dacwadan waxaa madaxweynaha ka dhanka ah waxaa soo gudbisay The Knight First Amendment Institute at Columbia University oo matalaysay lix ruux oo ka mid ah dadka Twitterka adeegsada oo uu Trump ka mamnuucay bartiisa ka dib markii ay online-ka ku dhaliileen ama canjileen.
Xigashada Sawirka, @REALDONALDTRUMP/TWITTER
Arbacadiina xaakimka ayaa aqbalay in bartan loo qaabeeyay "meel ay bulshadu ku xiriirto" xaqna ay u leeyihiin dhammaan muwaadiniinta Maraykanka ah.
Maraykanka oo baaraya 'farogalin' FBI ku samaysay ololihii doorashada Trump
Twitter oo u digtay 330 milyan oo cinwaan
Xaakimkan ayaa ka diiday waxyaabihii ay ku doodayeen qareennada Trump.
Ciwaanka uu Trump ku leeyahay Twitterka waxaa ku taxan 52 milyan, waana barta uu ka xiiseeyo baraha ay bulshadu ku xiriiraan, wuxuuna ku soo biiray bishii Maarso ee 2009kii.
Mas'uuliyiin xabsi guri loo geliyay qaraxii Beyrut
Saddex arrimood oo uu Joe Biden dhabarka uga jabinayo Donald Trump